အဆိုပါ 2020 တစ်နှစ်တာအခကြေးငွေများ Belirlendi Ankarakart - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီဗဟို Anatolia ဒေသကြီး06 တူရကီဖော်ထုတ်ခဲ့သည့်နေရာ 2020 တစ်နှစ်တာအခကြေးငွေများ Ankarakart
13 / 08 / 2019 Levent Elmastaş 06 တူရကီ, ဗဟို Anatolia ဒေသကြီး, ခရီးသည်ရထား, ရထားလမ်း, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, မြို့ပြရထားစနစ်များ, ဘီးစနစ်များ, ခေါင်းစီးသတင်း, Metro, တူရကီ, TELPHER 0
အဆိုပါအခကြေးငွေများ ankarakart နှစ်ပေါင်းစိတ်ပိုင်းဖြတ်ထားသည်
တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံတွင်လက်ရှိအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအခမဲ့သို့မဟုတ်လျှော့အသုံးပြုသော Ankarakart ယခုနှစ် 2020 ဗီဇာကြေးကိုသတ်မှတ်ထားပါတယ်
တူရကီမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Mansoor အခမဲ့ကန်သက်ကြီးရွယ်အိုများနှင့်အများပြည်သူန်ထမ်းအသစ်ကအခွန် 1 ဇန်နဝါရီလ 2020 သည့် နေ့မှစ. တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိပါလိမ့်မည်ကြေညာခဲ့သည်မှ '' အပေါ် Ankarakart '' တူရကီနှင့်လျှော့စျေးတွင်နေထိုင်, ပြည်ထောင်စုတို့ကခေါ်ဆောင်သွားဆုံးဖြတ်ချက်အတွက်မဲပေးသြဂုတ်လအစည်းအဝေးတွင်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်နှေးကွေးနေ။
: 61-65 အသက်နိုင်ငံသားများ, TSI, PTT နှင့်ဆရာများ Paso ပြည်သူ့ကတ်, အတ္တဘတ်စ်ကား, မြေအောက်ရထားနှင့် ပတ်သက်. အသုံးပြုသူများကို, အ Ankaray နှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားအောက်ပါအတိုင်း 1 ဇန်နဝါရီလ 2020-31 ဒီဇင်ဘာလ 2020 နေ့စွဲဗီဇာအခကြေးငွေဖြစ်လိမ့်မည်အကြားပေးဆောင်
သက်ကြီးရွယ်အိုများအားအခမဲ့ကတ် (61-65 လူငယ်တွေရဲ့): 120 ပေါင်
TSI ကတ်: 85 ပေါင်
PTT ကကတ်: 85 ပေါင်
PUBLIC ကတ်: 85 ပေါင်
ဆရာများ Paso: 70 ပေါင်
Ankarakart ဘယ်မှာဝယ်လို့သလော Ankarakart ရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အဘယ်မှာရှိအရောင်း Ankarakart အချက်များကိုဖြည့်နေကြသနည်း 07 / 08 / 2014 Ankarakart ဘယ်မှာ Ankarakart, Ankarakart ရောင်းအားများမှာဘယ်မှာအချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရရန်မည်သို့ဝယ်မှ: တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ကဒ်ဂျစ်ကားကနေတဆင့်စက္ကူကဒ်ကယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။ Ankarakart ကဒ်များကိုအသုံးပြုနိုင်နိုင်ငံသားများ၏သန်းပေါင်းများစွာကိုကယ်တင်နိုင်ရန်အတွက်စျေးကွက်အပေါ်ထင်ရှား၏။ Ankarakart ဘယ်မှာဝယ်လို့သလော Ankarakart ရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အဘယ်မှာရှိအရောင်း Ankarakart အချက်များကိုဖြည့်နေကြသနည်း မေးခွန်းတွေရဲ့အဖြေသည်။ Ankarakart တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကနေရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အနစ်နာခံ၏ပွဲပြီးနောက် Dikimevi နှင့် Besevler ကဒ်ကိုကိုးကားအင်တာနက်ကျော်လုပ်စေခြင်းငှါ, တစ်မြေအောက်ရထားဘူတာရုံမှယူနိုင်ပါတယ်။ ဒီဇင်ဘာလ 31 သာ5နှုန်းလျှော့ Ankarakart ပြန်လက်ခံရယူနိုင်တော့မည်သည်အထိလိုင်စင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲကျောင်းသားများ။ ကတ်များ 1 ...
ကျောင်းသားအခကြေးငွေများအတွက်ရထားလမ်းစနစ်လမ်းကြောင်းပြောင်းရန်ဖြစ်ရပြီ | mastiff 03 / 07 / 2013 Belirlendi နောက်တဖန် Samsun သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစင်တာ (UKOME) အတွက်အလင်းရထားလမ်းနှင့်အမြန်ဘတ်စ်ကားကိုပုံမှန်အတိုင်း၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့်သူတို့SAMULAŞ Inc ကိုကျင့်သောတိုးမြှင့်ကုန်ကျစရိတ်မှကျောင်းသားအခကြေးငွေဘာ့ဂ်ပြန်လည်အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင်ရှိသည်ဟုညှိနှိုင်းရေးရထားအွန်လိုင်းကျောင်းသားအခကြေးငွေများ အထွေထွေမန်နေဂျာလီ Uner, "ဒါဟာကျောင်းသားတွေကိုသာအခွန်တိုးမြှင့်ခဲ့သည်။ တဦးတည်းအိမ်ခေါင်မိုးအောက်မှာစုဝေးစေကြသူဇူလိုင် 1 '' မူလတန်းကျောင်းကျောင်းသားများနှင့်ကျောင်းသား / ဆရာမ '' ၏အဖြစ်။ 75 ဟာတစ်ပြား '' မူလတန်း '' အခွန် 1.25 TL ကျောင်းသားများ, '' ကျောင်းသား / ဆရာမ '' ခရီးသွားအမျိုးအစား $ 1 1.25 မှစ. TL ပေါ်တွင်တင်ခံခဲ့ရသည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မူလတန်း 1 ။ နှင့်2။ တန်းကျောင်းသားများအတွက်လည်းအလင်းရထားလမ်းနှင့်အမြန်ဘတ်စ်ကားအခမဲ့အသုံးပြုမှုကိုပျော်မွေ့လိမ့်မယ် "ဟုသူကပြောသည်။ ရင်းမြစ်: ငါ့အ www.haberyurdum.co
2020 2020 အစ္စတန်ဘူလ်, Mega သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများအတွက်အိုလံပစ်များအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်း 19 / 02 / 2012 MARMARAY: 2013 တစ်နှစ်ချိတ်ဆက်ပါလိမ့်မည်သည့်အစ္စတန်ဘူလ်ရေလက်ကြားအောက်မှာနှစ်ဘက်အားဖြင့်စီမံကိန်းရဲ့အဆုံးမှာဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းပါလိမ့်မယ်။ ယင်းမက်ထရို၏အလိုင်းနှင့် ဆက်စပ်. အစ္စတန်ဘူလ်ဆင်ခြေဖုံးလိုင်းများအတွက်အသွားအလာပြဿနာများ၏ဖြေရှင်းချက်မှသိသိသာသာအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်လည်ပတ်ပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ်အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် 1.5 လူဦးရေသန်း, စီမံကိန်းနှစ်ဘက်အကြားသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးပေးပါလိမ့်မယ်။ wheel Tube: 2015 အတွက်ဝန်ဆောင်မှုထည့်သွင်းဖို့မျှော်လင့်စီမံကိနျး၏အုတ်မြစ်ချခဲ့သည်။ အဆိုပါဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအစ္စတန်ဘူလ်အတွက်ပင်လယ်၏အောက်ဆုံးနှစ်ဖက်စလုံးကားများနှင့်ဗင်ကိုသုံးပါလိမ့်မယ်စည်းလုံးညီညွတ်ပါလိမ့်မယ်။ တံတားဖြတ်ကူးနှစ်ခုပြွန်တောင်ဘက်တစ်ရက်အသုံးပြုမှုနှုန်း 90 တထောင်ယာဉ်များတည်ဆောက်လိမ့်မည်။ တံတားများနှင့်မြောက်ပိုင်း Marmara ကားလမ်း: တင်ဒါဧပြီလကျင်းပလိမ့်မည်, စီမံကိန်းအစိတ်အပိုင်းနှစ်ခုပါဝင်ပါသည် ... ။
Ankarakart ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်ဇန်နဝါရီလ 1 အတွက်တူရကီအတွက်စတင် 11 / 10 / 2013 ဇန်နဝါရီလအတွင်းစတင်ခြင်းတူရကီ 1 အတွက် Ankarakart ကာလ: မြို့တော် Started, ကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ဆရာမ Ankarakart မြို့တော်အကျိုးရှိမည်လျှော့စျေး၏ဖြန့်ဖြူးစတင်ခဲ့ပြီ, အနီရောင်ဖြန့်ဖြူး Kizilay မီထရိုဘူတာလျှော့စျေး Ankarakart နှင့်အတူကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ဆရာမကတော့မြို့ပြစည်ပင်သာယာအဆောက်အဦးအကျိုးရှိမည်။ ဒီဇင်ဘာလ 31 ကျောင်းသားများကိုတစ်ဦးလိုင်စင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲရှိနိုင်ပါသည်တိုင်အောင်, အနစ်နာခံ Besevler နှင့် Dikimevi ၏ပွဲအပြီးလျှောက်လွှာမီထရိုဘူတာရုံများအတွက်အရောင်းစတင်တံ့သော, အင်တာနက်ကနေတဆင့်ကဒ်စေနိုင်ပါသည်။ မသန်စွမ်းနိုင်ငံသားများ, စမတ်ကဒ်များကိုအဘယ်သူမျှမစောင့်နိုင်မှလိုင်စင်အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းဆရာများရှိနိုင်ပါသည်။ အဆိုပါတူရကီမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးအဆောက်အအုံနှင့်မီထရိုဖြန့်ဖြူးရေးစင်တာမှာကျောင်းသားသုံးပြီးကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများအတွက်လျှော့လက်မှတ်တွေ ...
up to date ဖြစ်နေကျောင်းသားများအတွက်ဒီဇင်ဘာလ 315နှုန်း Ankarakart ပြောင်းလဲမှုကြေး 16 / 12 / 2013 မြို့ကောင်စီဖြင့်အစည်းအဝေးတွင်တူရကီမြို့တော်, နိုင်ငံသားများ '' ဆန္ဒနှင့်တိုင်ကြားမှုများအပေါ်အခြေခံဘူတာရုံနေရာရွှေ့ဖို့လိုအပ်သောအားထုတ်မှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမည်မဟုတ်, လူတွေကိုဆုံးဖြတ်ပါစေ: Ankarakart ပြောင်းလဲမှုအခကြေးငွေကျောင်းသားများကို 31 TL များအတွက်ဒီဇင်ဘာလသည်အထိ5။ ဇန်နဝါရီလ 1 ဘတ်စ်ကား မှစ. မက်ထရိုကသဘောတူညီခဲ့ခဲ့ဖလှယ်မှုအခကြေးငွေ၏ကျောင်းသားများအတွက်5Ankarakart နှုန်းအဖြစ် Ankaray မှာစတင်မိတ်ဆက်ခံရဖို့ဆက်လက်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ပြစ်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုအတွက်စေ့စပ်ခံရဖို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းမရှိဘဲ Boulevard, လမ်းပေါ်မှာသို့မဟုတ်လမ်းအတွက်တထောင်ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲတူးဖော်ကြောင့်လျှောက်ထားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမြို့တော်ခရိုင်ကောင်စီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအလီ Ihsan သမ္မတမှာ၎င်း၏အစည်းအဝေး, 1 မှာကွယ်လွန် ...
Simplified မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူသက်ကြီးရွယ်အိုများ, Ankarakart 14 / 01 / 2014 65 အဟောင်းတွေမြို့တော်နိုင်ငံသားများအဖြစ်မက်ထရိုနှင့်ဘတ်စ်ကားတူရကီမှအဖြစ်သူတို့အခမဲ့စီးနင်းနိုင်မည်ချင်တိုင်းအချိန်: ရိုးရှင်းဖို့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူသက်ကြီးရွယ်အိုများ, Ankarakart ။ အကြီးတန်းနိုင်ငံသားများအဘို့မြို့ပြသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်လွတ်လပ်ခွင့်ပေးအခမဲ့ Ankarakart လိမ္မော်ရောင်၏ဖြန့်ဖြူး6အမှတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ အတ္တမှ General Manager Necmettin Tahiroğluနေဖြင့်တူရကီအတွက်နေထိုင်နိုင်ငံသားများမှ 60 နှစ်ရှိပြီနေ့ကိုဧရိယာနှင့် 61 TL ညီမျှပြီးမြောက်ရန်အရောင်အတွက်လိမ္မော်ရောင်အခမဲ့ Ankarakart, 75 နှစ်ပေါင်းထောက်ပံ့သတင်းအချက်အလက်များအဆိုအရသူ 64 ဘယ်နေရာမှာမဆိုနေထိုင်သည်အသက်နေ့ကိုဧရိယာနှင့်တူရကီကသူ့ 65 နှစ်ပေါင်းပြီးစီး နိုင်ငံသားများကိုလည်း£5လဲလှယ်အတွက်ပေးတော်မူ၏။ အခမဲ့ကတ်များဧရိယာ ...
တောင်းဆိုထားသောကတ် Cancellation ၏ Ankarakart5ပေါင်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် Paid 06 / 01 / 2016 တောင်းဆိုထားသော Cancellation ၏ Ankarakart5ပေါင်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက်ကတ် Paid: CHP တူရကီဒုတိယ Murat Eymir, Cankaya ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအတွက်အဆောက်အဦးများအတွက်ပေးဆောင်သည့်ဖျက်သိမ်းခြင်းများအတွက်ကတ် $ ၏5ANKARAKART စားသုံးသူစျေးနှုန်းဒိုင်လူကြီးများ၏ဘုတ်အဖွဲ့မှမေတ္တာရပ်ခံ။ Eymir "ကောင်းတစ်ဦးသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုကိုရောင်းရောင်းဖို့အခြားမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောကုန်ပစ္စည်းများသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုများကိုချိတ်ဆက်လို့မရပါဘူး။ Ankaralıကအလုံအလောက်လက်မှတ်တွေသို့မဟုတ်ဘတ်စ်ကားအသုံးပြုမှုကြေးလက်ခံရရှိခဲ့သည်ဆိုပါကဘတ်စ်ကားလျှင်, စျေးနှုန်းစျေးနှုန်းပေးဆောင်ကြဖို့လုံလောက်ပါတယ်။ "သူကဆိုသည်။ $5များ၏ကဒ်စျေးနှုန်း၏ဖျက်သိမ်းခြင်းများအတွက် CHP တူရကီဒုတိယ Murat Eymir, ANKARAKART များအတွက်ပေးဆောင်, Cankaya ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးအတွက်စားသုံးသူခုံသမာဓိခုံရုံးအဆောက်အဦမှဝန်ခံခဲ့သည်ပြီးနောက်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကြေညာချက်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ ankarakart ထံမှ Eymir ...
ELVs အဆိုပါ ANKARAKART နှင့်အတူမွမ်းမံပါလိမ့်မယ် 05 / 05 / 2017 အဆိုပါ ELVs နှင့်အတူ ANKARAKART မွမ်းမံပါလိမ့်မယ်: အလခြမ်းလိုင်း 168 စုစုပေါင်းပုဂ္ဂလိကအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး (ELV) အီလက်ထရောနစ်လက်မှတ် "ANKARAKART" စနစ်န်ဆောင်မှုများပေး Sincan- Ulus- ကျော်ကြာပါတယ်။ အလေ့အကျင့်တနင်္လာနေ့, မေလ 15 အပေါ်စတင်ပါလိမ့်မည်။ ငါကို အသုံးပြု. သွားလာကြလိမ့်မည်မြို့ပြ ELVs အတွက်အထူးအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးခရီးစဉ်, "ANKARAKART" တွင်ရရှိနိုင်သည့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး, မြေအောက်ရထား, Ankaray, ဘတ်စ်ကားနှင့်ကေဘယ်လ်ကြိုးကားအတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားမှုမှBaşkentlilerအကျိုးအတွက်။ အတ္တအရာရှိများက "လက်ခံအတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချရ UKOME" ကတနင်္လာနေ့ 21 ဧပြီလ 15 လက်ခံရရှိခဲ့ကွောငျးဖျောပွခွငျးအားဖွငျ့ ANKARAKART စနစ်, အတ္တအထွေထွေညွှန်ကြားမှုရဲ့အဆိုပြုချက်ကို, အပို့ဆောင်ရေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (UKOME) တွင် ELVs ပြောင်းရန်ဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်, ထို့နောက်လျှောက်လွှာ 'ELV စတင်ပါလိမ့်မည်နိုင်ပါစေ ထဲမှာ s ကိုခရီးစဉ်လက်မှတ် ...
BAŞKENTRAYမီးရထား "Ankarakart" ကိုအသုံးပြုခံရဖို့ 25 / 12 / 2017 တူရကီပြည်နယ်မီးရထားသမ္မတနိုင်ငံတူရကီ, Sincan နှင့်Kayaşအတွက်အတ္တ, BAŞKENTRAY၏ (TCDD) သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုတူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်အထွေထွေညွှန်ကြားမှုခရီးသည်ရထား်ထမ်းဆောင်အကြား, အ Ankarakart လက်မှတ်စနစ်၏ပေါင်းစည်းမှုများအတွက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ပါလိမ့်မယ်။ တူရကီပြည်နယ်မီးရထားပို့ဆောင်ရေးအဖြစ်ကနေရေးသားထားသောကြေညာချက်အရ, တူရကီ, အတ္တ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအတွက်ခရီးသည်ရထားသည့်အီလက်ထရောနစ်သေဆုံးသူစုဆောင်းခြင်းစနစ်ထည့်သွင်းပါလိမ့်မည်။ ခရီးသည်ရထား "Ankarakart" တူရကီမြို့တော်မြူနီစီပယ်သမ္မတအတွက်အီလက်ထရောနစ်သေဆုံးသူစုဆောင်းခြင်းစနစ်, 25 ဒီဇင်ဘာလပေါင်းစပ်များအတွက် protocol ကို TCDD ပို့ဆောင်ရေး Inc ကိုနှင့်အတ္တ၏အထွေထွေညွှန်ကြားမှုအကြားလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့လိမ့်မည်။
Ankarakart 2020 တစ်နှစ်ရဲ့အဖိုးအခ
အဆိုပါ 2020 တစ်နှစ်ဗီဇာကြေး Ankarakart
အဆိုပါစီမံကိန်းများ၏တဲ့အခါမှာမြေအောက်ရထားလိုင်းကျောက်ခေတ် Mahmutbey Current Status?
Haydarpasa မြေအရောင်း Way ကို MI?
Ankarakart ဘယ်မှာဝယ်လို့သလော Ankarakart ရဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? အဘယ်မှာရှိအရောင်း Ankarakart အချက်များကိုဖြည့်နေကြသနည်း
ကျောင်းသားအခကြေးငွေများအတွက်ရထားလမ်းစနစ်လမ်းကြောင်းပြောင်းရန်ဖြစ်ရပြီ | mastiff
2020 2020 အစ္စတန်ဘူလ်, Mega သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများအတွက်အိုလံပစ်များအတွက်အမည်စာရင်းတင်သွင်း
Ankarakart ခေတ်ပြိုင်ဂျာနယ်ဇန်နဝါရီလ 1 အတွက်တူရကီအတွက်စတင်
up to date ဖြစ်နေကျောင်းသားများအတွက်ဒီဇင်ဘာလ 315နှုန်း Ankarakart ပြောင်းလဲမှုကြေး
Simplified မှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်အတူသက်ကြီးရွယ်အိုများ, Ankarakart
တောင်းဆိုထားသောကတ် Cancellation ၏ Ankarakart5ပေါင်ကုန်ကျစရိတ်များအတွက် Paid
ELVs အဆိုပါ ANKARAKART နှင့်အတူမွမ်းမံပါလိမ့်မယ်
BAŞKENTRAYမီးရထား "Ankarakart" ကိုအသုံးပြုခံရဖို့
သတင်းများ Archive လကိုရွေးချယ်ပါ သြဂုတ်လ 2019 (367) ဇူလိုင်လ 2019 (637) ဇွန်လ 2019 (503) မေလ 2019 (525) ဧပြီလ 2019 (419) မတ်လ 2019 (520) ဖေဖော်ဝါရီလ 2019 (483) ဇန်နဝါရီလ 2019 (502) ဒီဇင်ဘာလ 2018 (620) နိုဝင်ဘာလ 2018 (504) အောက်တိုဘာလ 2018 (436) စက်တင်ဘာလ 2018 (517) သြဂုတ်လ 2018 (486) ဇူလိုင်လ 2018 (506) ဇွန်လ 2018 (580) မေလ 2018 (467) ဧပြီလ 2018 (544) မတ်လ 2018 (555) ဖေဖော်ဝါရီလ 2018 (500) ဇန်နဝါရီလ 2018 (557) ဒီဇင်ဘာလ 2017 (509) နိုဝင်ဘာလ 2017 (427) အောက်တိုဘာလ 2017 (538) စက်တင်ဘာလ 2017 (455) သြဂုတ်လ 2017 (505) ဇူလိုင်လ 2017 (479) ဇွန်လ 2017 (477) မေလ 2017 (494) ဧပြီလ 2017 (434) မတ်လ 2017 (540) ဖေဖော်ဝါရီလ 2017 (477) ဇန်နဝါရီလ 2017 (538) ဒီဇင်ဘာလ 2016 (487) နိုဝင်ဘာလ 2016 (631) အောက်တိုဘာလ 2016 (657) စက်တင်ဘာလ 2016 (541) သြဂုတ်လ 2016 (608) ဇူလိုင်လ 2016 (485) ဇွန်လ 2016 (661) မေလ 2016 (664) ဧပြီလ 2016 (700) မတ်လ 2016 (804) ဖေဖော်ဝါရီလ 2016 (855) ဇန်နဝါရီလ 2016 (751) ဒီဇင်ဘာလ 2015 (799) နိုဝင်ဘာလ 2015 (640) အောက်တိုဘာလ 2015 (624) စက်တင်ဘာလ 2015 (428) သြဂုတ်လ 2015 (493) ဇူလိုင်လ 2015 (505) ဇွန်လ 2015 (536) မေလ 2015 (577) ဧပြီလ 2015 (622) မတ်လ 2015 (1017) ဖေဖော်ဝါရီလ 2015 (878) ဇန်နဝါရီလ 2015 (1077) ဒီဇင်ဘာလ 2014 (963) နိုဝင်ဘာလ 2014 (826) အောက်တိုဘာလ 2014 (770) စက်တင်ဘာလ 2014 (598) သြဂုတ်လ 2014 (809) ဇူလိုင်လ 2014 (911) ဇွန်လ 2014 (735) မေလ 2014 (957) ဧပြီလ 2014 (972) မတ်လ 2014 (864) ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 (720) ဇန်နဝါရီလ 2014 (733) ဒီဇင်ဘာလ 2013 (664) နိုဝင်ဘာလ 2013 (656) အောက်တိုဘာလ 2013 (548) စက်တင်ဘာလ 2013 (570) သြဂုတ်လ 2013 (533) ဇူလိုင်လ 2013 (661) ဇွန်လ 2013 (577) မေလ 2013 (734) ဧပြီလ 2013 (1059) မတ်လ 2013 (1102) ဖေဖော်ဝါရီလ 2013 (811) ဇန်နဝါရီလ 2013 (906) ဒီဇင်ဘာလ 2012 (911) နိုဝင်ဘာလ 2012 (1168) အောက်တိုဘာလ 2012 (830) စက်တင်ဘာလ 2012 (886) သြဂုတ်လ 2012 (976) ဇူလိုင်လ 2012 (863) ဇွန်လ 2012 (591) မေလ 2012 (445) ဧပြီလ 2012 (563) မတ်လ 2012 (699) ဖေဖော်ဝါရီလ 2012 (546) ဇန်နဝါရီလ 2012 (417) ဒီဇင်ဘာလ 2011 (149) နိုဝင်ဘာလ 2011 (35) အောက်တိုဘာလ 2011 (23) စက်တင်ဘာလ 2011 (18) သြဂုတ်လ 2011 (25) ဇူလိုင်လ 2011 (18) ဇွန်လ 2011 (16) မေလ 2011 (13) ဧပြီလ 2011 (13) မတ်လ 2011 (33) ဖေဖော်ဝါရီလ 2011 (24) ဇန်နဝါရီလ 2011 (13) ဒီဇင်ဘာလ 2010 (335) နိုဝင်ဘာလ 2010 (12) အောက်တိုဘာလ 2010 (15) စက်တင်ဘာလ 2010 (12) သြဂုတ်လ 2010 (16) ဇူလိုင်လ 2010 (9) ဇွန်လ 2010 (19) မေလ 2010 (6) ဧပြီလ 2010 (3) မတ်လ 2010 (62) ဖေဖော်ဝါရီလ 2010 (303) ဇန်နဝါရီလ 2010 (1838) ဒီဇင်ဘာလ 2009 (4) နိုဝင်ဘာလ 2009 (1) အောက်တိုဘာလ 2009 (3) စက်တင်ဘာလ 2009 (3) သြဂုတ်လ 2009 (2) ဇွန်လ 2009 (3) မေလ 2009 (2) ဧပြီလ 2009 (3) မတ်လ 2009 (9) ဖေဖော်ဝါရီလ 2009 (4) ဇန်နဝါရီလ 2009 (3) နိုဝင်ဘာလ 2008 (1) အောက်တိုဘာလ 2008 (1) စက်တင်ဘာလ 2008 (2) သြဂုတ်လ 2008 (1) ဇူလိုင်လ 2008 (2) ဇွန်လ 2008 (2) မေလ 2008 (2) ဧပြီလ 2008 (1) မတ်လ 2008 (3) ဖေဖော်ဝါရီလ 2008 (5) ဇန်နဝါရီလ 2008 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2007 (2) အောက်တိုဘာလ 2007 (2) ဇူလိုင်လ 2007 (1) မေလ 2007 (1) ဧပြီလ 2007 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2007 (2) ဇန်နဝါရီလ 2007 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2006 (1) အောက်တိုဘာလ 2006 (3) သြဂုတ်လ 2006 (1) ဇွန်လ 2006 (2) မေလ 2006 (2) ဧပြီလ 2006 (2) မတ်လ 2006 (2) နိုဝင်ဘာလ 2005 (2) သြဂုတ်လ 2005 (1) ဇွန်လ 2005 (1) မတ်လ 2005 (2) ဖေဖော်ဝါရီလ 2005 (1) ဇန်နဝါရီလ 2005 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2004 (1) အောက်တိုဘာလ 2004 (3) ဇူလိုင်လ 2004 (1) မေလ 2004 (2) ဒီဇင်ဘာလ 2003 (1) အောက်တိုဘာလ 2003 (1) မေလ 2003 (1) မတ်လ 2003 (1) ဖေဖော်ဝါရီလ 2003 (1) ဇန်နဝါရီလ 2003 (1) ဒီဇင်ဘာလ 2002 (1) အောက်တိုဘာလ 2002 (4) သြဂုတ်လ 2002 (1) ဧပြီလ 2002 (1) မတ်လ 2002 (2) ဇန်နဝါရီလ 2002 (2) ဇူလိုင်လ 2001 (1) ဇွန်လ 2001 (1) မတ်လ 2001 (1) မေလ 2000 (3) မတ်လ 1999 (1) အောက်တိုဘာလ 1998 (2) မတ်လ 1998 (1) သြဂုတ်လ 1997 (1) အောက်တိုဘာလ 1996 (1) သြဂုတ်လ 1996 (2) မေလ 1995 (1) သြဂုတ်လ 1992 (1) မေလ 1990 (1)